बहिनीको चिठ्ठी | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
जेठ २५ गते, २०७२ - १७:३४
मनभित्र य स्तै यस्तै मिठा कूरा आए । म सोलूबाट ओखलढूङ्गा झर्दै थिए । रिङ्गबाट पूर्व हिडेका कमरेडहरुसँग भेट भयो । म त्यो दिन बिर्सन्न–बाँचून्जेल । जनसेनालाई छासमिस गर्ने पार्टी निति मूताविक अदलबदल गरिदै रहेछ । बहिनीको पत्र दिए । मेरी बहिनीको त्यो पत्र म सँग अहिले पनि छ । मैले पत्रमा लेखिएको एक एक अक्षर सम्झेको छूः
आजसम्म सन्चै छू । भोली के हून्छ थाहा छैन । तपाईलाइ के छ ? तपाइको घाउ निको भयो की भएन ? चाडै निको होस्–म बहिनीको तर्फबाट यही कामना !
म पार्टीमा लागेदेखि पढ्नलेख्न सिकेको छू । यो पत्र म आफै लेख्दैछू । तपाइलाई पत्यार लाग्दैन होला । देखेपछि पत्याउनूस्, अहिले हतारो केही छैन । तपाईले भन्नूहून्थ्यो नि पूर्वकी ‘दीलमाया’ । मैले ति आदर्श शहिद दिदीको नाम चोरेको छू र मेरो नयाँ नाम बनाएको छू । मलाई चोर नभन्नूहोला बरु च्याङग्री भने म अब रिसाउन्न ।
दाजू म त्यतिबेला बेस्करी रोए । पहिलो दिन तपाई शहिद भएको खबर आयो । म शैलूङ्गको टूप्पोमा थिए । दूगूना मोर्चाका घाईते योद्धाहरुलाई सूरक्षा गर्ने मेरो जिम्मा थियो । म तपाईको खबर सून्दा साग केलाउदै थिए । मेरो त होश हराएछ । निकैबेर पछि होशमा आए रे । मेरी मिल्ने साथि दर्शनाले मलाई होशमा ल्याइछे ।
तपाईले दर्शनालाई चिनेको छैन होला । मलाई असाध्यै माया गर्छे, भन्दै थिइ म तेरो दाइलाई चिन्छू । म तपाईको नाम लिदै दिनैभर रोए । आमा सम्झे, आमालाई कसरी सूनाउनू ? म फेरी रोए । रुदा रुदै दिन सिङ्गै बितेछ ।
सत्ते भए पोक्चे, म त्यो रात निदाइन । छ्याङ्गै उज्यालो हूदा सम्म मेरा आँखा जोडिएनन् । रात रात भर दर्शना पनि जागै बसी । कत्तिबेला हो कून्नि मैले ख्याल गर्दा उ पनि रोइरहेकी थिई ।
भोलीपल्ट फेरी खबर आयो, घाइते मात्रै हो रे । मैले पहिला त बिश्वासै गरिन । मलाई फकाउनलाई होला भन्ठाने । पछि कमाण्डर राम्जी आउनूभयो । कमाण्डरले त फकाउनलाई झूटो बोल्दैनन्–बल्ल मैले बिश्वास गरे । गाली नगर्ने भए एउटा कूरा भन्छू । पहिला भन्नूस् गाली गर्ने की नगर्ने ? गरे नी गर्नूस् । म सून्दिन क्यारे, उतै पूर्वेली बहिनीलाई म सम्झेर गाली गर्नूस् । यही ठान्नूस मेरो केटाकेटी बूद्धी लागेछ । म खबर सूनेको साँझ नजिकैको माइकोथान गए र आसू खसाल्दै प्राथना गरे ‘मेरो दाजूलाई केही नभएको होस्’ ।
हेर, कति राता आँखा ! किन रिसाएको ?। मैले भगवान कहा मानेको हू र ? अत्यासमा सहारा खोजेको मात्रै हूँ । मलाई गाली गर्नू भो भने आमालाई भन्दिन्छू के !
भो अब यो कूरा छोडौ ।
म जनसेनामा छू । दूगूनामा म राम्रोसँग लडे रे ! दिनेश दाइले बधाई दिनू भयो । अरुलाई नभन्दिनूहोला, म जानेर होइन भूलचूकमै ब्यारेकभित्रको एउटा कोठाको झ्यालमा पूगेछू । भित्र हेरे, एकजना खासखूस गर्दैथियो, झ्यालबाट राइफलको नाल छिराए र बजाए । उसले आइया उइया केही भनेन । चारैतिर लडाई चलिराखेको थियो । म भित्र पसे । त्यो त हतियार भण्डारण कोठा रहेछ । म सबै बोक्न सक्दैनथे । कहिले झ्याल, कहिले ढोका गर्दै कूरेर बसे । हतियार लिन जति दूश्मन आउ“थे मैले भित्रैबाट गोली हाने । पछि साथिहरु आए र हतियार सबै उठायौ ।
आमा न्यास्रो लाग्यो भन्दैथिइन् । डाडाबारी बाजै छ रे । पल्लाबारी आमाले कम्यूउनलाई दिइछन् । आमा कम्यूउनतिर जान्छू भन्थिन् – मैले त जाउ भन्दिए । तपाई यता कहिले आउने ? आउँदा मलाई पिप्लामेठ ल्याउनूहोला नि फेरी –म त ठूली भइसके ! उहि दर्शनालाई दिउला । मलाई निको चाल लागेको छैन, त्यो रात म त दाई भनेर रोए, दर्शना के भनेर रोएकी ?…हो ? मेरी …हूनी छे !
पत्र लामो भयो । तपाईको पढ्ने समय नहून सक्छ । अब टूङ्गयाउछू । मलाई पत्रसत्र पर्दैन, तपाई आउनूपर्छ । म सानि हूदा की च्याङग्री हूँ की जनसेना ? तपाईलाई देखाउनू छ । पातालमा एम्बूस हान्ने कूरा छ । मैले त झगडै गरे, मलाई नलाने रे । कत्तिका ! नलगेर हून्छ ? म त भागेर भएपनि जान्छू । फेरी लड्छू । ढिलो नगर्नूस है दाजू ! फेरी म कमाण्डर भइसकूला र तपाईले च्याङग्रीलाइ रेडसेल्यूट हान्नूपर्ला !
च्याङग्री उर्फ दीलमाया
पत्र पढीसकेपछि म लाजले रातो भए । दर्शनाको कूरो उसले थाहा पाइ जस्तो छ । ‘छि कत्ति मात्तेकी, पिप्लामेठ दर्शनालाई ख्वाउनू रे ! म त्यसलाई भेटू मात्रै मैले जानेको छू’ । मलाई पहिला पोक्चे भन्थी । ‘तलाई पख फेरी पोक्चे भनिछे’ । दायाँ हातको बूढी औलो मोर्चालाई चढाएपछि मैले केही लेख्न पाएको छैन । मेरी बहिनी लेख्न पढ्न जान्ने भइछ । पूर्वको अनूभूति सूनाउँछू । उसैले डायरीमा उतार्ली ।
(रात फुलेको याम बाट साभार)
जेठ २५ गते, २०७२ - १७:३४ मा प्रकाशित